MB 2017 May, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Mararka qaarkood waxaan la hadlayaa kuwa rumaysta ah ee ay ku adag tahay inay fahmaan sababta Ruuxa Quduuska ahi, sida Aabaha iyo Wiilku, uu yahay Ilaah - mid ka mid ah saddexda qof ee Saddexanka. Waxaan inta badan u adeegsadaa tusaalooyinka buugga si aan u muujiyo tayada iyo ficilada tilmaamaya Aabaha iyo Wiilku inay yihiin shaqsiyaad iyo in Ruuxa Quduuska ah lagu sharaxay si la mid ah qofka. Ka dib waxaan magacaabi doonaa magacyo badan oo loo adeegsado tixraaca Ruuxa Quduuska ah ee Kitaabka Quduuska ah. Ugu dambayntiina, waxaan galay waxa Ciise baray Ruuxa Quduuska ah. Waraaqdan waxaan diiradda saari doonaa waxbaristiisa.
Injiilka Yooxanaa, Ciise wuxuu ka hadlay Ruuxa Quduuska ah seddex qaab oo kala ah: Ruuxa Quduuska ah, Ruuxa runta, iyo Paraclētos (waa eray Giriig ah oo lagu tarjumay tarjumaadyo kala duwan oo Baybalka ah oo lala yeelanayo u doodayaal, la taliyayaal, caawiyayaal iyo kuwa wax qaliya.). Qorniinku wuxuu muujinayaa in Ciise uusan u arkin Ruuxa Quduuska oo kaliya inuu yahay isha xoogga. Ereyga 'paraklētos' macnihiisu waa "qof istaaga" waxaana badanaa loogu yeeraa suugaanta Griiga qof metelaya oo difaacaya qof arrintiisa. Qoraalladii Yooxanaa, Ciise wuxuu isu yeerayaa paraklētos wuxuuna isla ereyga u adeegsadaa tixraaca Ruuxa Quduuska ah.
Fiidnimadii fiidnimadiisa ka hor intaan la dilin, Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay inuu iyaga ka tagayo (Yooxanaa 13,33), laakiin wuxuu ballanqaaday inuusan uga tegin "agoon". (Yooxanaa 14,18). Meeshiisii, wuxuu ballanqaaday, inuu aabe weydiisan lahaa inuu u diro "mid kale oo ah" Paraklētos] "oo markaas iyaga la jiri doona (Yooxanaa 14,16). Isaga oo leh "mid kale", Ciise wuxuu tilmaamay inay tahay midda koowaad (Isaga) iyo midka imanaya, isaga laftiisu, wuxuu ahaan lahaa qof rabaani ah oo ah Saddex-geesood, maahan xoog. Ciise wuxuu iyaga ugu adeegay sidii paraklētos - hortiis (xitaa xilliga duufaanka daran), xertii waxay heleen geesinimo iyo xoog ay kaga baxaan "aaggaga raaxada" si ay ugu biiraan wasaaradiisa waxtarka aadanaha oo dhan. Ciise wuxuu yidhi nabad galyo oo iyaga si bayaan ah ayay u welwelsanaayeen. Ilaa waqtigaas, Ciise wuxuu ahaa xumaha xerta (eeg 1 Yooxanaa 2,1, meesha Ciise loogu yeerayo "u doode" [Paraklētos]). Intaa ka dib (gaar ahaan ka bacdi Bentakostiga ka dib) Ruuxa Quduuska ahi wuxuu noqon lahaa u doodeeda - had iyo jeer lataliyeheeda, qalbi qabow, caawiye iyo macalin. Wixii Ciise xertiisii ​​u ballanqaaday iyo wuxuu Aabbuhu u soo diray ma ahan xoog oo keliya, laakiin waa qof - qof saddexaad ee Saddex-geesoodka, oo ay wasaaradiisu tahay inay raacaan oo ku hanuuniyaan xertii jidka Masiixiyiinta.
Waxaan aragnaa adeegga shaqsi ahaaneed ee Ruuxa Quduuska ah inta lagu jiro Kitaabka Quduuska ah: Bilowgii 1: wuxuu ku dul sabtiyaa biyaha; Injiilka Luukos: wuxuu dul mariyay Maryan. Waxa lagu sheegay 1 jeer afarta Injiillada, 56 jeer Falimaha Rasuullada iyo 57 jeer waraaqaha rasuul Bawlos. Qorniinkaan waxaan ku aragnaa shaqada Ruuxa Quduuska ah shakhsi ahaan siyaabo fara badan: raaxo, barid, hagitaan, digniin; xagga xulashada iyo hadiyadaha, iyo caawimaadda salaadda aan itaalka lahayn, innaga oo cadeynaya sidii carruur la korsaday, oo na xoreeyay si aan Ilaah ugu baryi lahayn inuu yahay Abbaheen (Aabaha) sida Ciise u yeelay. Raac tilmaamaha Ciise: laakiin markuu Ruuxu runta yimaado, wuxuu idinku hanuunin doonaa runta oo dhan. Maxaa yeelay isagu isagu isma hadli doono; laakiin wuxuu maqli doono, wuu hadli doonaa, oo waxa mustaqbalka dhici doona ayuu kuu sheegi doonaa. Wuu i ammaani doonaa; maxaa yeelay, isagu iga qaato, wuuna kuu sheegi doonaa. Wax kasta oo aabuhu leeyahay anigaa iska leh. Sidaa darteed ayaan u idhi: Isaga wuu iga qaadi doonaa, wuuna kuu sheegi doonaa (Yooxanaa 16,13-15).
Wadaagga aabaha iyo wiilka, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay howl gaar ah. Halkii uu ka hadli lahaa naftiisa, wuxuu dadka u tilmaamayaa Ciise, oo markaa u keenaya Aabaha. Halkii uu ka yeeli lahaa doonistiisa, Ruuxa Quduuska ah wuxuu ku qaadaa doonista aabbaha sida uu wiilku leeyahay. Doonista rabbaani ah ee, midaysan, ee ah Ilaaha saddexanka ah wuxuu ka yimaadaa Aabbaha xagga Ereyga (Ciise) waxaana fuliya Ruuxa Quduuska ah. Waxaan hadda ku faraxsanaan karnaa oo aan khibrad u helnaa jiritaanka Ilaah xagga shaqada Ruuxa Quduuska ah, Parakl Paratos-ka. Adeeggeenna iyo cibaadadeennu waxay ka tirsan yihiin Ilaaha saddex ah, oo leh saddex Shakhsi oo rabaani ah, oo mid ahaanshaha, ficil, rabitaan iyo higsasho. Waad ku mahadsan tahay Ruuxa Quduuska ah iyo shaqadiisa.
Cinwaanka Ruuxa Quduuska ah ee Kitaabka Quduuska ah
Ruuxa Quduuska ah (Sabuurradii 51,13:1,13; Efesos)
Ruux talo iyo xoog leh (Ishacyaah 11,2)
Ruuxa xukunka (Ishacyaah 4,4)
Ruuxa aqoonta iyo ka cabsashada Rabbiga (Ishacyaah 11,2)
Ruuxa Fadliga iyo Salaadda (Sekaryaah 12,10)
Awooda Ilaaha ugu sarreeya (Luukos 1,35)
Ruuxa ilaah (1 Korintos 3,16)
Ruuxa Masiixa (Rooma 8,9)
Ruuxa weligiis ah ee Eebbe (Cibraaniyada 9,14)
Runta runta ah (Yooxanaa 16,13)
Ruuxa nimcada (Cibraaniyada 10,29)
Ruuxa ammaanta (1 Butros 4,14)
Ruuxa nolosha (Rooma 8,2)
Ruuxa xigmadda iyo muujinta (Efesos 1,17)
Raaxeeyaha (Yooxanaa 14,26)
Ruuxa ballanka (Falimaha Rasuullada 1,4-5)
Ruuxa Carruurnimada [Korsashada] (Rooma 8,15)
Ruuxa Quduusnimada (Rooma 1,4)
Ruuxa iimaanka (2 Korintos 4,13)